Global Voices teny Malagasy » Fampifanarahana Ny Atao Amin’ny Fiovana Toetrandro Henjana Ao Mali Sy Madagasikara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Febroary 2019 11:20 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika (fr) i Lalatiana Rahariniaina, Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Mali, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Siansa, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Vaovao Tsara, Voina
Ala ao anatin'ny faritr'i Kayes ao Mali CC-NC-2.0
Nitovitovy ireo fahasahiranana marobe natrehan'i Mali sy Madagasikara tato anatin'ny taona dimy farany. Savorovoro politika niafara taminà fanonganam-panjakana izay nahitana ny fionganan'ny filoham-pirenena voafidy tny amin§dry zareo mialoha ny fahataperan'ny fe-potoam-piasany. Vokatr'izany, nitsontsorika ambany be ny toekaren'ireo firenena roa ireo raha ny harinkarena faobe no resahana. Ankehitriny, miezaka manarina indray ireo rafitra politika rava ka mametraka ireo rantsamangaika vao avy nofidiana i Madagasikara sy i Mali.
Fanamby iray natrehan'ireo firenena roa ireo saingy tsy dia fantatra loatra ny adin'izy ireo hanoherana ny fiovana mahery vaikan'ny toetrandro. Ireo firenena marefo matetika no mora iharan'ireo vokatry ny fiovaovàn'ny toetrandro mahery vaika, saingy tsy tsapa io fomba fiteny io raha tsy tamin'ny fiovan'ny tontolo iainana vao haingana tao Madagasikara sy tao Mali.
Fiantraikany tsy azo lavina
Ao Mali, miha manome toerana ny tanihay ao Sahara ao avaratra ny ala. Ny faritr'i Kayes  dia marika famantarana ny fandrosoana tsy azo ihodivirana ho tany hay ao amin'ny faritra izay nahitana ala nikitroka fahiny ka lasa faritra feno fasika midadasika sy vato no hita amin'izao fotoana izao.
Niresaka ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ao amin'ny faritra maliàne  [teny anglisy] i Adrien de Chaisemartin sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny biraon'ny McKinsey ao Johannesburg, manao hoe:
Saika azo ambara ho firenena maina tanteraka i Mali, iharan'ny haintany matetika. Ny fiakaran'ny maripàna sy ny fihenan'ireo rotsakorana no fambara amin'ny fiovan'ireo toetry ny andro satria mikisaka mankany atsimo sy any amin'ireo tany lonaka ny tany hay. Ao anatin'ireny faritra ireny, efa miatrika vanim-potoana sarotra amin'ny haintany ireo tambanivohitra izay miankin-doha amin'ny fambolena sy fiompiana ary tsy manana vahaolana azo isafidianana hiatrehana azy ireny. Maro ireo miakatra any an-drenivohitra, ireo hafa mankany an'ny faritra atsimo somary tsy dia karankaina loatra.
Ny faritr'i Kayes ao Mali sisintany iraisany amin'i Sénégal, avy amin'ny wikipedia CC-BY-2.0
Toy izao no fomba fanombanan'izy ireo ny zava-misy ankehitriny sy ny fahavoazana ara-toekarena ho an'ny firenena  [teny anglisy]:
Ny fikisahan'ny faritra ara-toetrandro – vokatra mifangaro amin'ny fiakaran'ny salan'ny maripàna antonony sy ny rotsakorana – dia efa manosika sahady ireo faritra fambolena sy tontolo iainana ho any atsimo nandritra ireo taona 50 farany, nohon'ny tahan'ny rotsakorana nidina ho manodidina ny 200 milimetatra sy ireo tahan'ny maripàna 0,5°C nandritra io vanim-potoana io ihany. [..] Ny endri-javatra ratsy amin'ny fiovàna miakatra be dia mety hiteraka fatiantoka manodidina ny 300 tapitrisa dolara isan-taona (manodidina ny 15 isan-jaton'ny sandan'ny fambolena sy ny fiompiana) ; ny endri-javatra tsara kosa, dia fatiantoka 120 tapitrisa dolara isan-taona (6 isan-jato).
Ao Madagasikara, mbola tena loza kokoa ny vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro. Taorian'ireo rivodoza roa nifanesy (Giovanna tamin'ny taona 2012 sy Haruna tamin'ny taona 2013 ) izay nahakasika ny Nosy ary namindrana olona 100 000 fara-fahakeliny, notafihan'ny andiam-balala ny faritra atsimo. Hazavain'i Emmanuel Perrin eo amin'ny maxisciences  ny fomba fifandraisan'ireo trangan-javatra ireo:
Namely ny Nosy Madagasikara ny rivodoza Haruna. Nefa, ny fandalovany dia namorona an'ireo fepetran-kamandoana manome vàhana tsara ny fanatodizan'ireo valala mpifindra monina. Tsy nanao hetsika ara-potoana ireo tomponandraikitra ka, ankehitriny, nahatratra 500 tapitrisa ny isan'izy ireo, araka ny vinavinan'ny asa fanisàna vao haingana.
Fanafiham-balala tao afovoan-tanànan'i Fianarantsoa, Madagasikara
Ny fandaharanasa erantany momba ny sakafo dia manondro fa 60 isanjaton'ny voka-bary no ho voa amin'ny fanafiham-balala. Ny dona mivantana avy amin'ny rivodoza Haruna ihany koa dia tena tsapan”ireo mpamboly tao atsimo satria velaran-tany 6 351 hektara no tondraka. Azo jerena ato amin'ity lahatsary an'ny mpampiasa YouTube, ongbelavenir ity, ireo sary tsisy sivana ahitana ireo tondradrano:
Ahoana no fomba fampifanarahana amin'izany
Noho izany, inona no azon'ny mponina eo an-toerana atao mba hanoherana ny fanafihan'ny toetrandro ny fomba fiainan'izy ireo? Indreto hevitra vitsivtsy an'i Michael Kleine  sy ireo mpahay siansa mpiara-miasa aminy na ireo mpikaroka, niainga avy amin'ireo vahaolana an'ny Fikambanana Iraisampirenena'ireo Ivontoerana Fikarohana momba ny Ala (IUFRO):
Fomba fitantanana vaovao no tsy maintsy anampiana ireo mpisehatra mahomby sy ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina, ireo fandraisana fanapahan-kevitra mangarahara sy tomponandraikitra, ary ny zaramira an'ireo tombontsoa. Ary ny tetika fampifanarahana ireo ala amin'ny fiovan'ny toetrandro dia tokony hirindra amin'ny an'ireo sehatra hafa ary ampidirina ao anatin'ireo fandaharana sy tetikady fampivelarana ny firenana tsirairay sy isam-paritra.
Eny an-kianja, ireo tetika vaovao dia mifampiankina amin'ny zava-misy eo an-toeranasy ny karazan'asa ao amin'ny faritra. Ohatra, azo toherina amin'ireto fepetra manaraka ireto ny fihenan'ny vokatra : ampitomboina ny fahasamihafan'ny zavatra volena ary ambolena ireo karazam-boly maroroka sy vetivety dia vokatra, toy ny karazam-bary NERICA:
Ny Dr. Balgis Osman Elasha dia nanipika ny maha-zava-dehibe ny fahafantarana ny zava-misy eo an-toerana sy ny fahazoana tohana amin'ireo mpitarika vondrom-piarahamonina  [teny anglisy] mba hametrahana ireo fepetra vaovao:
Mety hitondra vokatra mifangarika ny politika mitovy, ho an'ireo sehatra samihafa na ireo asa samihafa ao anaty sehatra iray mitovy, ohatra, nisy vokany nahomby tamin'ny sehatra miaina amin'ny rotsakorana nahazatra ny fanafoanana ireo fanampiana ara-bola tamin'ny zezika sy fanafody ho an'ny fambolena (tamin'ny fampiasana izay kely indrindra), ary vokatra ratsy kosa ho an'ny fambolena itarihan-drano amin'ny milina (tamin'ny alalan'ny fampiasana betsaka ny zezika sy fanafody) […] Mpisehatra fanalahidy ao anatin'ny zotra politika Ireo mpitarika vondrom-piarahamonina, manana fahalalana goavana izy mikasika ireo teratany raha resaka fampiasana araka ny tokony ho izy sy fitehirizana an'ireo harena voajanahary. Amin'ny lafiny iray, ireo fitsipika mahazatra sy ireo baiko izay omen'izy ireo dia heverina ho toy ny masina eo anatin'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/15/134844/
 faritr'i Kayes: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Kayes
 ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ao amin'ny faritra maliàne: http://www.mckinsey.com/insights/sustainability/extreme_climate_conditions_how_africa_can_adapt
 Haruna tamin'ny taona 2013: https://globalvoicesonline.org/2013/03/01/cyclone-haruna-kills-23-and-leaves-22000-homeless-in-madagascar/
 Emmanuel Perrin eo amin'ny maxisciences: http://www.maxisciences.com/criquet/une-invasion-de-criquets-ravage-les-cultures-de-madagascar_art29458.html
 hevitra vitsivtsy an'i Michael Kleine: http://theiufroblog.wordpress.com/2010/05/11/african-forests-and-people-need-to-adapt-to-climate-change/
 fahafantarana ny zava-misy eo an-toerana sy ny fahazoana tohana amin'ireo mpitarika vondrom-piarahamonina: http://www.aiaccproject.org/Final%20Reports/Final%20Reports/FinalRept_AIACC_AF14.pdf